Fiarovana ny ala : tsy misitraka ny tombontsoa ny besinimaro | NewsMada
Fiarovana ny ala : tsy misitraka ny tombontsoa ny besinimaro
Par Taratra sur 28/01/2017
Maro ny tetikasa sy ny mpamatsy vola misehatra amin’ny fiarovana ny tontolo iainana, indrindra ny ala sy ny zavamananaina ao aminy. Nanao fikarohana lalina tany amin’ny Tandavanala Ankeniheny-Zahamena (Caz), nandritra ny roa taona, ny mpikaroka malagasy sy vahiny miisa 52, nanadihady raha mampihena ny fahantrana ny tombontsoa azo avy amin’ny fiarovana ny tontolo iainana (P4ges).
Raha fehezina ny valin’ny fikarohana, tsikaritra fa tsy nihena ny fahantrana satria maro ny mponina eny ifotony tena miankina amin’ny natiora ny velon-tenany, toy ny fanaovana tavy ambolena, ny saribao, sns. Tsy nihena koa ny fahantrana satria vitsy ireo misitraka ny tombontsoa azo avy amin’ireo fandaharanasa sy tetikasa miaro ny tontolo iainana. Izany hoe, vitsy ny olona na tokantrano mandray anjara amin’ny fiarovana ny tontolo iainana miohatra amin’ny mponina amin’ny ankapobeny.
Mihena 50% ny fidiram-bola
Misy fiantraikany ratsy amin’ny velontenan’ny mponina ny eny ifotony ny fandrarana tsy hanao tavy, nampihena 10-50% ny fidiram-bolan’izy ireo. “Tena ilainay amin’ny fiainanay andavanandro ny kitay”, hoy ny mponina any amin’ny kaominina Ambatovola. “Mitombo ny taranaka, mihena anefa ny tany, …, ka tsy afaka mandeha na aiza na aiza izahay”, hoy ny mponina ao amin’ny kaominina Maroseranana.
Araka ny fikarohana anefa, mitahiry entona karbonina betsaka kokoa sady mandonaka ny tany ny ala noho ny tany savoka sy ny tany tsotra. Miantoka fitomboan’ny zavamaniry maro ny fisian’ny biby anaty ala. Manatsara ny habetsahan’ny rano eny amin’ny renirano amin’ny fotoana mainandro ny fisian’ny ala velona sy ny ala nambolena.
Nilaza ny Pr. Ramamonjisoa Bruno, mpikaroka ao amin’ny departemanta Rano sy Ala ao amin’ny Oniversiten’Antananarivo, anisan’ireo mpikaroka fa hany vahaolana hiarovana ny ala, ny fambolen-kazo tena izy.
Anisan’ny miaro ny Tandavanala Ankeniheny – Zahamena ny fikambanana Conservation international. Tato anatin’ny 10 taona, niisa 600 ny tetikasa madinika notohanany nanatsarana ny fiveloman’ny mponina. Nahatratra 216 ny tetikasa mikasika ny fambolena, 44 mikasika ny fiompiana tantely ary 107 ho an’ny fiompiana.